Steve Ballmer Quotes: Ake 40 Akanakisisa MaQuotes uye Nguva Yake paMicrosoft | Economy Finance
Claudi casals | 14/01/2022 09:00 | General hupfumi
Kana tichida kubudirira, hazvimbokuvadzi kuzvizivisa uye kuverenga nezvevane simba zvakanyanya uye vakapfuma vanhu munyika. Vauya pachinzvimbo ichocho nechikonzero, handiti? Zvavanotaura, pfungwa nemazano avo anogona kukurudzira zvakanyanya, kunyangwe isu tisingawanzo kubvumirana navo. Muenzaniso ungave Steve Ballmer, anozivikanwa nekuve CEO weMicrosoft. Parizvino, Ndira 2022, ane mambure anokosha 99,9 bhiriyoni emadhora. Tichifunga nezvekubudirira kwayo, zvinokurudzirwa kuti utarise makotesheni aSteve Ballmer.
Kwete chete isu tinonyora mitsara yake yakanaka, asi isu tichataurawo zvishoma nezvekuti murume uyu ndiani. Zvinogona kunge zvichinakidza, kunyanya tichifunga kuti muna 2021 akaiswa pachinzvimbo chegumi nemana paForbes runyorwa rwevanhu vakapfuma kwazvo munyika.
1 Steve Ballmer's 40 Best Quotes
2 Steve Ballmer uye Microsoft
Steve Ballmer's 40 Best Quotes
Tisati tatsanangura kuti murume mukuru uyu ndiani, ngatitangei tanyora Steve Ballmer's 40 mazwi akanakisa:
"Nekufamba kwenguva, Internet ichawanikwa kubva kuPC, terevhizheni, uye michina isina waya."
"Ndine zvakawanda zvemashoko pamusoro pezvinoitika mukambani. Ndinofunga ndinonzwa zvakanaka patiri uye zvinofungwa nevanhu."
Ndinoda kutaura manyaradzo angu akadzama nekushaya kwa Steve Jobs, mumwe wevakatanga indasitiri yedu uye muoni wechokwadi. Mwoyo wangu unoenda kumhuri yake, munhu wese paApple, uye wese akakanganisika nebasa rake. "
"Ndinoda kuva nemigove yeMicrosoft kusvika ndapa chimwe chinhu kune vanopa kana kuti ndafa."
"Vana vangu - muzvikamu zvakawanda vanozvibata zvakangofanana nevamwe vana vakawanda, asi muchikamu ichi, ndine vana vangu vakarongedzerwa pfungwa: Havashandisi Google, uye havashandise iPod."
"Nyika iri kuchinja, asi Microsoft iri kuchinja."
"Pakupedzisira, kufambira mberi kunowedzera kana kushoma kuyerwa kuburikidza nemaziso evashandisi."
“Unorohwa. Iwe unorova mamwe madziro ... ndiko kushinga kwawakaita, kusingadzoreki, kuti pakupedzisira une tarisiro uye wakatsunga uri pamusoro pazvo izvo zvinosarudza kubudirira kwako. "
"KuMicrosoft, tiri kudyara zvakanyanya mukuchengetedza nekuti tinoda kuti vatengi vavimbe nezviitiko zvavo zvekombuta, kuti vatore mukana wakazara wenyika yakabatana yatinogara mairi."
"Ini ndinofunga kuti zvinhu izvi [social media] zvichave nezvinokwezva, asi pane fadhi, chimiro chemazuva ano nezve chero chinhu chinonyanya kufadza kune vechidiki."
“Chikonzero chebhizinesi redu kushandisa mari paR&D. Hapana chinoyerera nepapombi kana netambo kana chimwe chinhu. Isu tinofanirwa kugara tichigadzira hunyanzvi hutsva hunobvumira vanhu kuita chimwe chinhu chavasingafungire kuti vanogona kuita nezuro wacho. "
"Kazhinji, ini ndinogara ndichifarira kuve nehurongwa hwakajeka uye kunyatsotarisa. Panguva imwecheteyo iva wakasimba kwazvo, uye wakapinza mukuurayiwa. "
"Munhoroondo yedu yese, Microsoft yakakunda nekuita mabheti makuru uye akashinga. Ini ndinotenda kuti ino haisi nguva yekudzikisa chiyero cheshuviro yedu kana chiyero chekudyara kwedu. Kunyangwe mikana yedu yakakura kupfuura nakare kose, isu zvakare takatarisana nevakwikwidzi vatsva, misika inokurumidza kufamba uye zvinodiwa nevatengi zvitsva."
“Pfungwa ipi neipi inozove huru inogona kukohwewa kwemakumi emakore. Kune rimwe divi, kana iwe uchida kuramba uri mukuru, unofanirwa kubheja pazvinhu zvitsva, mabheti makuru uye ane ushingi. "
"Ini handizive kana paine munhu aratidza kuti muunganidzwa wevanhu vanoita zvinhu zvavo unotogadzira kukosha."
"Ini ndinofunga kungave kusachenjera uye kusave nehanya kuti mumwe munhu aedze kuputsa Microsoft."
"Ndine tarisiro huru nezve tarisiro yedu, uye sezvandinotaura kubhodhi redu, sezvandinotaura kuvashandi vedu, ino ndiyo nguva yekuisa mari. Pane mikana yakawanda. Ngatiisei mari mumukana iwoyo uye tinyatsouwana."
"Zvinogara zvakanaka kana uine boka revanhu vari kusundidzira kuita zvirinani, kuve nani, kugadzira zvirinani, kushandira zvirinani, tora vatengi munzira itsva zvirinani."
"Zvichida ini ndiri chiratidzo chekuchembera, uye ndinofanira kuenderera mberi."
“Musika wemasheya wagara uine mita yawo. Dzimwe nguva kunokurumidza uye dzimwe nguva kunonoka. Wachi yakatyoka yakwana kaviri pazuva."
"Ndezvekuve nevatungamiriri vakanyanya vanogona kutyaira agile innovation uye agile kuita sarudzo."
"Unogona kuve neApple mubhizinesi renhare, kana RIM, uye vanogona kuita zvakanaka, asi kana 1.300 bhiriyoni mafoni pagore ese ari smart mafoni, software ichave inonyanya kufarirwa pamafoni iwayo ichava software. .inotengeswa nemunhu asingagadziri ega maphone."
"Uye wozotarisa kuSpaces, pane iyi innovation huru yakabuda pasina. Isu tine nhamba yekutanga blogging saiti munyika nekuda kwehunyanzvi huripo. "
"Ndadzokera kuchinhu chimwe chete: isu tine pombi hombe munhoroondo yekambani mumwedzi gumi nemiviri iri kutevera, uye takave nemhedzisiro yezvemari inoshamisa mumakore mashanu apfuura, uye isu tinotarisira kuwana mari ine manhamba maviri. kukura zvakare mugore rezvemari '12."
"Ndinotenda kuti pfungwa dzakanaka dzinowanzoitwa zviri nani nokukurumidza pane zvishoma nezvishoma."
"Handina chokwadi chekuti mablogi ndiyo nzvimbo yakanaka yekutora chimwe chinhu. Vanhu vanoda kublogi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, uye zvinogona kana kusamiririra. "
"Nenzira yakati, tekinoroji chishandiso chemhando yesarudzo yemunhu, yekugadzira yega, yesimba remunhu, yekuwana munhu. Vana vangu havafe vakanzwisisa kuti zvisati zvave zvakaoma kuwana uye kuwana zvinhu uye kuziva izvo nyika inoziva uye kuona zvinoonekwa nenyika. Zvisinei, mazuva ose ari nyore.
“Tarisai portfolio yechigadzirwa, tarisai mibairo yakanaka kwazvo yezvemari yatakava nayo mumakore mashanu apfuura. Iwe unongowana irwo rudzi rwekuita padivi rekuvandudza, kudivi rezvemari, kana uri kunyatsoteerera uye kuita kune zvakanakisa mazano atinawo kubva kuvanhu. "
"Indasitiri yedu iri kuita hunyanzvi hwekuvandudza uye iri kutungamirwa nechiitiko chinozivikanwa segore."
"Chandinofunga chinoparadzanisa Microsoft kubva kune vamwe vanhu vazhinji ndechekuti tinoita mabheti akashinga. Tinoshingirira mazviri, asi tinozviita. Vanhu vazhinji havaiti kubheja kwakashinga. Kubheja kwakashinga hakuvimbise iwe kukunda, asi kana ukasaita mabheti akashinga haugone kuramba uchibudirira. Indasitiri yedu haibvumire iwe kuti uzorore pamararamiro ako zvachose. Chero pfungwa huru inogona kukamwa. Chero pfungwa inozove yakakura zvechokwadi inogona kukohwewa kwemakumi emakore. Kune rimwe divi, kana iwe uchida kuramba uri mukuru, unofanirwa kubheja pazvinhu zvitsva, mabheti makuru uye ane ushingi. "
“Uyu mukana wakanaka kuna Don, uye ndinomushuvira kubudirira. Ndinodada zvikuru nebasa uye chiono chinoguma muXbox One. Ndinonyanya kufadzwa nemafambisirwo anoitwa Xbox neshanduko yemidziyo yedu nemasevhisi nekuunza pamwe zvakanakisa zveMicrosoft."
"Zvatakasangana nazvo mumakore achangopfuura zvakaita kuti vamwe vanhu vabvunze kuti, Tingavimba neMicrosoft here?"
“Dzaini inosvikika dhizaini yakanaka: inobatsira vanhu vasina hurema pamwe chete nevanodaro. Kuwanika ndeye kubvisa zvipingamupinyi uye kupa zvakanakira tekinoroji kumunhu wese. "
"Makambani makuru nemashandiro avanoita, tangai nevatungamiriri vakuru."
“Ndinoda kuudza vanhu kuti zvigadzirwa zvedu zvese nemabhizinesi zvichapfuura nezvikamu zvitatu. Pane chiratidzo, kushivirira uye kuuraya. "
"Ndinoda kuti zvese zvakavhurika sosi zviitike paWindows."
"Kana CEO asingaone nhandare, hapana mumwe munhu anogona. Chikwata chingangoda kuchionawo, asi CEO anofanira kunyatsoona nzvimbo yese yemakwikwi. "
"Chinangwa chedu mukuita shanduko idzi kuita kuti Microsoft iwane kugona kukuru mukugadzirisa kukura kunoshamisa kuri pamberi uye nekuita pane yedu software-based services zano."
“Chakanyanya kubatsira paruzivo rwemichina ndechekuti inoita kuti vanhu vaite zvavanoda. Inobvumira vanhu kugadzira, inobvumira vanhu kuti vabudirire, inobvumira vanhu kudzidza zvinhu zvavasingafungire kuti vangadzidza kare, saka neimwe nzira ndezvekugona.
"Hatina monopoly. Isu tine chikamu chemusika. Pane musiyano."
Steve Ballmer uye Microsoft
Mushure mekuverenga mitsara yaSteve Ballmer, tichazotaura zvishoma nezvenguva yake kuMicrosoft. Iye muAmerican investor uye muzvinabhizinesi akatsiva Bill Gates sa CEO wekambani. Nhaka yaakasiirwa nekumusiya yakave nekamwe kakugamuchidzwa kwakasiyana. Kunyange chiri chokwadi kuti, panguva yekutonga kwaBallmer, Microsoft yakawedzera kutengesa kwayo katatu uye yakapetwa kaviri purofiti yayo, munhu haagone kufuratira chokwadi chekuti. yakarasikirwa nekutonga kwayo pamusika. Microsoft, ina Steve Ballmer ari pachigaro, yakapotsa imwe yeanonyanya kukosha tekinoroji maitiro ezana ramakore rechiXNUMX: Mafonifoni. Iyi niche yaive yakagarwa ne iPhone uye Android mafoni.
Zvino zvaunoziva mitsara yaSteve Ballmer, ndinovimba izvi zvakashanda sekukurudzira kana kukurudzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Steve Ballmer Quotes
Chii chinonzi chipangamazano wezvemari